Ny mponina mainty hoditra mainty hoditra dia mpanefy piramida voalohany - Afrikhepri Fondation
Imhotep, ilay mpanao mari-trano Ejiptiana lehibe
Ireo Afrikana mainty hoditra Afrikana no voalohany mpanao piramida
Vakiteny: 12 min
JIzaho dia Imhotep, ilay mpanao mari-trano egyptiana lehibe, izay nanao fanafody ara-tsiansa ihany koa, nanasitrana tamin'ny herin'izao rehetra izao ary nampianatra fivavahana ara-panahy. Nanangana ny piramidan'i Djoser-Saqqara aho tokony ho 5.000 2.000 taona lasa izay ary tranobe maro hafa toa ny tempolin'i Edfu. Rava anefa ny tempoliko tany Edfu ary XNUMX taona taty aoriana dia naorina teo ambonin'io ny Tempolin'i Horus ankehitriny.
Mpivory maro no efa tany Edfu nandritra ny an'arivony taona ho an'ny fanasitranana ary tany amin'ny toerana hafa izay nampiharako ny fahaizako ho dokotera sy ny fahaizako manasitrana ny heriko. Ireo toerana fivahiniana masina ireo dia toerana izay azonao ampitahaina amin'izao fotoana izao amin'i Lourdes ao Frantsa, Fatima any Portiogaly ary toerana hafa any amin'ireo kontinanta amerikana, Afrika, Azia ary ny sisa.
Olona maro no nitsidika ireo toerana ireo mba hanasitrana ny vatany sy ny hafa handray fahendrena sy fahazavana. Ireo toerana ireo dia toeram-ponenana matanjaka amin'ny tontolon'ny voary. Araka ny fantatsika, ny herin'izao tontolo izao dia afaka manasitrana ny vatana ara-batana sy manazava ny fanahy rehefa ampiasaina amin'ny faharetana ara-panahy ambony kokoa.
Noraisinay taminao ireo fepetra rehetra nandritra ny fampiasana bilokalao farany teo amin'ny tempolin'i Edfu. Fantatrao izany, zanako vavy, satria efa namangy azy 15 taona lasa izay ary nilaza taminareo izahay fa Edfu izany. Noforoninay teo anoloan'ny fidirana vaventy nisy Anjoron'ny Fahazavana miaraka aminao, Midwayers sy ireo fitaovana hafa any an-danitra.
Noforoninay izany mihoatra ny fitahirizam-piarovana efa misy an'izao tontolo izao mba hamerenana azy io ary hampiasa azy io amin'ny fahefana feno miaraka amin'ireo hery vaovao avy amin'ny Trinite izay nahasarika ny tany ho mpizaha tany an-tapitrisa Manomboka manerana an'izao tontolo izao ity fitsidihana ity tempoly ity isan-taona.
Ny momba ny 36 000 dia 'Temple of Wisdom' izay napetraky ny taranak'i Adamson sy Ratta mba hampitana fahamarinana ambony momba ny fiainana ara-panahy sy ara-tsaina ary ara-batana.
16 000 taona lasa izay dia niorina tao Edfu ny misiôneran'ny klerjy Sethita, ary ny fisoronana natsangan'i Seth, zanaka lahimatoa an'i Adama sy i Eva teraka tao amin'ny Zaridainan'i Edena. Izy ireo dia mpanabe mpisorona izay nitondra foto-pinoana ara-pivavahana ambony ho an'ireo foko mpifanolo-bodirindrina ary fahalalana momba ny fahasalamana sy ny fahadiovana.
Noho izany, ny kolontsaina voalohany eto Ejipta ary miresaka eto 36.000 mankany 15 000 taona, dia nahazo ny fahalalana momba ny Zaridainan'i Edena. Ny fahalalana ny fisian'ny Fivalonan'Andriamanitra izay tonga mba hiaina ao amin'ny olombelona mba hampivelatra ny fanahy Morontia izay hampiray azy aorian'ny fahafatesana ara-batana eo amin'ny tontolo selestialy. Nantsoin'izy ireo hoe "Ka" io Fanahy Masina io ary ny fanahy Morontia izay mbola velona aorian'ny fahafatesana ara-batana "Ba".
Ny finoana ny reincarnation dia tsy mbola nampianarina nandritra ireo fotoana ara-tantara tany Ejipta. Betsaka ankehitriny no mino fa ny Ejipsianina fahiny dia nino ny fananganana ny reinkarnation, nefa tsy izany no izy. Fandikana ratsy izany ankehitriny, fahazoana hevi-diso "Bokin'ny maty ejipsiana" ary ny antony mahatonga ny mummification. Ireo fahadisoana ireo koa dia vokatry ny fitondran-tenan'ireo sampy teo aloha mpisorona.
Ny tempolin'i Edfu amin'izao fotoana izao dia tsy namboarin'ny pretra izay nahafantatra an'Andriamanitra, fa noho ny mpisorona masiaka izay nanaiky fihetsika hafa. Nampiasa ny fahaiza-manaony ara-tsaina izy ireo mba hahitana ny fitiavan-tena mba hihazonana ny hery faratampon'ny fisoronana sy ny fari-piainany ambony. Nibaiko ity Tempoly Avaratra-Atsimo ity izy ireo mba handroahana an'io toerana io ary hampiasa azy io amin'ny fomba mahasoa azy ireo fa tsy any Atsinanana-Andrefana. Nentinay ianao teo mba hanamafisana sy hanamafisana ny zava-drehetra. Na izany aza, tsy mbola nahita "haizina" ianao ary tena ara-dalàna izany.
Hatramin'ny nandehananao tany amin'ireo firenena Berber ao Sahara tamin'ny alàlan'ny famokarana dia tsy nahitanao demony na angovo mainty ratsy navoakan'ny "tambajotra mainty". Betsaka ny efa nopotehina tany amin'ireo faritra efa notsidihina. Ity dia teo amin'ny morontsiraka Mediteraneana avy any Maraoka mankany Siria ary kely lavitra.
Hahita tsy ampoizina maro ianao eo amin'ny asa ataonao any Afrika. Tsy ho vokatry ny asan'ny aizina tsy hita maso izay ho hitanao intsony, fa ireo olona mavitrika ao Sahel sy ambany. Efa nataonay tamim-pahatsorana ny fihaonanareo tamin'ny diany Afrika. Avy eto no hahafantaranao ny fomba fiasan'ny lehiben'ny orinasa lehibe indostrialy sy pharmaceutique ary banky: iza izy ireo, aiza ny fahefany afovoany, inona no manosika azy ary ny tsy firaharahiana izay itondrany ny mponina ao an-toerana toerana izay nametrahany ireo fitaovana mavesatra izay tena nilainy. Azonao atao ny manome valiny momba ny toerana alehanao, kanefa avelao ny mpamaky hahafantatra ny antony anoandavanay anao any amin'ireny toerana manokana ireny, toy ny ataonao.
Egyptie talohan'ny vanim-potoana talohan'ny Dynasties Lehibe dia nipetraka tamina foko samihafa mifangaro. 25.000 taona lasa izay dia nisy foko efatra lehibe tany Egypt: hazakazaka fotsy mifangaro, hazakazaka mena mena, hazakazaka mifangaro volontany mainty ary hazakazaka mifangaro mainty.
Ny Afrikana mainty hoditra Afrikana no voalohany mpanao piramida sy trano lehibe tany Afrika. Fantatr'izy ireo ny momba ny Firafitr'Andriamanitra ao anatiny sy ny fanahy Morontia mandrakizay. Noho izany Wivine, tsy tokony ho gaga intsony ianao raha mahita olona Afro-Amerikana taranaka izay mahafantatra ny fisian'ny Firaisam-pinoana anatiny, nefa tsy namaky ny bokin'i Urantia, satria manana izany fahalalana ara-panahy izany ho an'ireo razambeny Afrikana izy ireo.
Ny morontsirak'i Afrikana Mediterane sy Afrikana Afovoany dia voalohany nipoahan'ny volon-kolaka. Ny ankamaroan'izy ireo dia matevina, mainty hoditra na mena-mavo-oliva-hoditra; Ireo no olona voalohany nikambana tamin'ny Nodite sy ny taranak'i Adama tatỳ aoriana. Ireo taranaka ireo dia nahafantatra ny fomba hanorenana, hanefy metaly, hanenona, hamaky sy hanoratra ary hanorina fanjakana goavana ho an'i Afrika Atsimo.
Izy ireo dia nonina tany Afrika Andrefana tamin'ny fiandohan'ny Atsinanana, niaraka tamin'ny Mediteraneana ary avy eo dia tafaverina tao afovoan'i Sahara, raha nanangona sisin-tany ny mponina amoron-tsiraka, grika, romanina, arabo ary avaratra. Tao amin'ny faritry ny kaontinanta ihany izy ireo no afaka nitazona ireo mpanafika fotsy ary nitazona ny fanjakany sy ny kolontsainy nandritra ny fotoana maharitra.
Ireo zana-borona rehetra ireo dia ny razamben'ireo Berbers izay nonina tany Sahara alohan'ny fanalaviran-tany ary misy ny Afrikana mainty hoditra. Ny mponina Berber ankehitriny dia avaratr'i Sahara sy any amin'ny faritra atsimon'i Sahel ary efa niforona hatramin'ny sisin-tany fahiny teo amin'i Afrika Afovoany sy ny faritr'i Mediterane hatramin'ny tany Eoropa, fivarotana varotra.
Ny mummification ny vatana, ny zavakanto iray izay nananako sy nanatsara ny tenany aza, dia tsy natao hanavao ny fanahin'ny maty. Antony hafa izany. Fantatray tsara fa ny vatana ara-batana dia fongana na ho ela na ho haingana. Ny tanjona dia ny mitahiry ny vatan'ny olombelona fara-tampon'ny Farah sy ny mpanjaka izay tonga tsimoramora avy amin'ny taranak'i Nodite, Adamite na Adamsonite. Ny fiarovana ireo vatana ireo dia mifandray amin'ny fanahy mivoatra Morontia sy ny fahaiza-manaon'izy ireo ara-batana, saingy tsy misy ifandraisany amin'ny finoana ny vatana vaovao.
Nisy zavatra toy izany koa nitranga tamin'ny andron'ny megalithic tany Sina, Rosia, Eoropa ary kontinanta amerikana, izay nahitàna ireo sisan-taolam-paty tany an-dolomena, tendrombohitra sy tempoly. Ny sasany aza dia nanapa-kevitra ny hamela azy ireo ho velona indray miaraka amin'ny zava-pisotro sy sakafo vitsivitsy mba hitazonana ny fatiny efa ela.
Raha ny marina dia ny hany zavatra tiantsika holazaina aminao dia ny hoe ny fanahy Morontia dia miala amin'ny vatan'ny vatana raha tsy miala amin'ny selan'ny sela rehetra.
35.000 taona lasa izay dia efa nisy olona manana fahalalana matanjaka sy manerantany mahery vaika manerana an'izao tontolo izao.
Mpanjaka izy ireo, mpanjakavavy, mpisorona, mpisorona, mpanasitrana ary olon-kendry.
Noho ny fiarovana tsara ny faty na ny fihazonana velona an-tsitrapo, ny fanahin'ireto olona ireto dia afaka mampirisika ny tenany hampita ny fahalalany amin'ny taranaka ho avy.
Miresaka momba ny fanao amin'ny fotoana iray misy fifandonana ara-panahy goavana isika. Tany an-tranomaizina ny tany ary tsy nisy fifandraisana azo natao tamin'ireo seza tany amin'ny tany an-toerana. Io no fotoana nisy ny ady teo amin'ny Printsy Caligastia tamin'ny planeta sy ny namany ary ireo izay tsy nivadika tamin'i Kristy Michael, ny lalàn'ny Paradisa sy ny Ray any an-danitra. Ireo fanao ireo dia nijanona tsikelikely tamin'ny fanjavonan'ireo olona nanana toetran'olona sy talenta mihoatra ny olombelona.
Koa satria i Kristy Michael dia teraka eto tahaka an'i Jesoa ary namelatra ny "Fanahin'ny fahamarinana" taorian'ny nahafatesany manerana ny planeta, ny ankizy rehetra dia mahazo Fragmente avy amin'Andriamanitra mba hampivelatra ny fanahy Morontia raha vantany vao misy kevitra. Midika izany fa fantany ny fahasamihafana eo amin'ny tsara sy ny ratsy ary maneho ny fiandohan'ny fanompoam-pivavahana amin'Andriamanitra.
Tsy maintsy tadidinao fa tamin'ny andro taloha dia tsy dia mazava loatra ny fakana tahaka ny Fragmente an'Andriamanitra toy izany haingana sy tanora. Noheverina fa natokana ho an'ny mpanjaka lehibe, faraidiny, mpisorona, ary olona marina sy tsara tokoa izany.
Ankoatr'izay, ny fahalalana ilaina ho an'ny olombelona dia efa voarakotry ny fitomboan'ny mponina velona izay tsy mahatsikaritra izany. Maro amin'ireo olona ireo no avy amin'ny "Corps of Destiny" ary miasa ho an'ny governemantan'ny planetarin'ny Seraphim.
Izany no antony nahatonga anay nandefa anao tany amin'ny tempoly sasany tany Belize mba haka fahalalana izay natao tao amin'ny Soul of Morontia lehibe. Azo antoka fa izany no nitranga tany Uxbenka ary izany no antony angatahinay aminao koa mankany Palenque. Nalefa tany aminà toerana tany amin'ny firenena hafa koa ianao noho ny antony iray ihany.
Ho an'ireo izay manontany tena hoe nahoana no tsy maintsy mitsidika tempoly maro amin'ny Mayan ianao dia mamaly anao aho: Aza gaga, satria ny fahalalana ny mpanao trano an'ireny tempoly ireny dia avy amin'ny taranaka mifangaroan'ny taranak'i Adama, Nodita, Ejiptiana, ary taranaky Adamson sy Ratta.
Nandeha bebe kokoa taona 15 000 isika mihoatra noho izay azonao eritreretina ary ny sarintanin'izao tontolo izao dia efa voasintona tamin'izany fotoana izany avy amin'ny Midwayers. Betsaka ny fikarohana nataonao momba ny génétique misy ankehitriny eo amin'ny sehatr'izao tontolo izao, ary ny Ejipsianina fahiny dia nahita ny fototarazony tany amin'ny tany amorontsirak'i Aostralia. Nahita ireo arkeology ireo foko avy any Afrika Atsinanana niaina tany Brezila mikasika ny 9.000 taona lasa izay. Ireo tanàna fotsy voarakotra dia tratra ela talohan'ny nahatongavan'ny Espaniôla tany amin'ny morontsirak'i Pasifika any Amerika Atsimo.
Aza mieritreritra koa fa ny taranaky ny taranak'i Adama rehetra dia nitaingin-tsoavaly ara-panahy taorian'ireo taona an'arivony nifangaro tamin'ny foko hafa, niala tao amin'ny Zaridainan'i Edena tany am-boalohany niaraka tamin'ny rehetra ny fahalalany ara-pivavahana.
Lasa olombelona tahaka anao izy ireo, na dia manana fiarovan-tena ambony aza indraindray ary fototra tsara kokoa ho an'ny fifandraisana ara-panahy. Na eo aza izany, maro ireo niharatsy noho ny fitondran-tenany, nanjary barbarika sy mahery setra, ny sasany aza dia nanao firaisana ara-nofo ary nanao sorona olombelona.
Tonga avy amin'ny hazakazaka amam-pahalalana marobe avy amin'ny taranak'i Adamites, Nodites sy ny lokon'ny olombelona: Ireo Andites. Nanana haavon-tsavony lehibe aho, hoditra mainty, volom-borona maivana ary kavina kely mahery.
Tonga teo aminao aho satria nifandray tamin'ny iray amin'ireo toerana sy tranoko tiako indrindra ary hanitsy tsipiriany kely momba ny kolontsaina Ejiptiana sy ny firenena Afrikana. Aza tsinontsinoavina ny vahoaka Afrikana mainty ary aza mihevi-tena mihoatra lavitra noho ny soatoavina ara-moraly sy ara-pon'ireo mponina fotsy, Aziatika, Arabo ary Hindoa ankehitriny.
Mbola nipetraka tao amin'ny zaridaina voalohany tany Edena i Adama sy i Eva. Any amin'ny saikinosy no misy an'i Syria amin'izao fotoana izao, dia nisy Nodite maizina be dia be izay nipetraka tany akaikiny.
Io vahoaka be io dia efa nanangana sivilizasiona marobe ary nahay nanamboatra ny sehatry ny fananganana, metallurgy ary ny fitaratra. Niara-niasa tamin'i Adama sy Eva izy ireo mba hampandroso ireo foko mpifanolo-bodirindrina sy lavitra. Rehefa niely ny vaovao momba ny zava-nitranga teo anelanelan'i Eve sy Cano ilay Nodite, dia nisy fiantraikany hatezerana sy hetaheta hamaly faty teo anivon'ireo zanaka Adama.
Dia nirohotra nankany amin'ireo vohitra teo akaikin'ny Nodita izy ireo izay tsy mahatakatra ny zava-nitranga ary novonoiny daholo ny olona rehetra, anisan'izany ny rain'i Kaina izay mbola teraka. Famonoana olona tena izy io: tsy misy ankizy, tsy nisy vehivavy, tsy voavonjy. Tena nahagaga tokoa ity hetsika ity noho ny fifandraisan'ny taranaky ny Nodita mainty hoditra sy ny taranaky ny Adamita maivana manerana ny faritra manomboka any Syria ka hatrany Mesopotamia, avy any Ejipta ka hatrany amin'ny faritra ambanin'i Afrika .
Eritrereto izany ary asio tsoa-kevitrao. Ny firenena mainty sy mainty dia efa niahiahy ny vahoaka fotsy.
Mamporisika anao aho mba hanohy ny asanao. Manampy anao amin'ny asanao miaraka amin'ny Energies sy amin'ny fandringanana ny tambajotra mainty aho. Niaina ny vokatr'izany nandritra ny fiainako teto an-tany aho ary tsy maintsy nanohitra sy niady.
Raha mbola mahita tarehimarika manokana ianao mandritra ny fanazaran-tena ataonao dia hampahafantatra ny tenako aho. Tsy ireo Midwayers ihany no manampy anao hamorona ny Anchors of Light mandritra ireo fanazaran-tena ireo, fa ny fiakarana fanahy Morontia koa izay mahalala ny planeta. Misy maro amin'izy ireo izay avy amin'ny antsoina hoe hazakaza mainty sy loko maizina. Ka ity ny fanazavananao azy ny antony maha maro be ny Midwayers sy ny sary miloko mainty hafa ao anaty faritry ny Anchor of Light.
Mankalazà ny olon-drehetra ary manohy ny diany satria manampy anao amin'ny raharaham-barotra ianao ary faly izahay manana anareo. Zava-dehibe ny fandraisan'anjaran'ireo olona ao amin'ny planeta ireo andraikitra ireo ary maka fotoana handinihana ny fomba fampiasana ireo angovo ireo. Rehefa manao izany izy ireo, dia mampivelatra ny fanahin'izy ireo Morontia ho ambony ambony ambony ara-panahy ary manakaiky kokoa ny fivavahan'izy ireo anatiny. Amin'ny fanampiana anay, dia ampianarina ianareo. Ankoatr'izay, ireo traikefa rehetra ireo dia mampiroborobo ny fahatakaran'ny fandrosoanao manokana sy ny an'ny zanak'olombelona manontolo. Avy aiza ianao, aiza no alehanao ary ahoana no ahafahana manatratra izany tanjona izany amin'ny fomba tsara indrindra.
Heveriko fa nilaza ny zavatra rehetra aho ary namaly ny ankamaroan'ny fanontanianao. Veloma.
- Wikibolana, raki-bolana malalaka
Toerana: Mezza Verde any Placencia, Belize.
Ankehitriny: Carole, Nora ary Wivine tany Belize niaraka tamin'i Wilhelm tany lavitra tany Eoropa.
Nahazoana an'i Wivine.
Niresaka taorian'ny 1h13min i Imhotep. Fotoana fisaintsainana: 2 ora.
Initiation 5 lalana
Ny olan'ny saron-tava bété
Hanampy lahatsoratra amin'ny tranokala
Wayne Dyer (Audio) miala amin'ny fiezahana hanatratra ny dikany
Izany no mahatonga ny vavaka fivavahana ho any Amen na Amin